Nezvedu-QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD
Nyanzvi yekugadzira magnets uye Permanent Magnets Jenareta (PMGs yemhepo turbine)
QIANGSHENG MAGNETS CO., LTD (QM)bhizimusi repamberi tekinoroji iro rinogadzira uye rinotengesa magnets (akasangana uye akabatanidzwa NdFeB, Alnico, SmCo uye magneti kusangana), Kudhara Magnet Generator (PMG) ne mhepo turbine system. Tine vamiririri muUnited States, Australia, Italy, Uruguay, Nepal nedzimwe nyika.
Nehunyanzvi hwedu hwehunyanzvi, yedu yakawanda yekuverenga yezvisingagumi magineti zvinhu, uye yedu chaiyo chikamu chekugadzira & gungano kugona, isu tinokupa iwe izere magineti mhinduro. Kuva nezvakawanda kudarika 25 makore ruzivo rwunopa zvigadzirwa zvehunyanzvi uye dhizaini kugadziriswa pasi rose, isu takazvipira kuendesa iyo yepamusoro sosi yebasa revatengi, rubatsiro rwehunyanzvi uye kukosha kwauri.
Yedu indasitiri-inotungamira Injini timu iri pamwoyo wekugona kwedu kukupa iwe nemagineti mhinduro dzinosangana uye dzinopfuura zvaunotarisira. Mumwe nemumwe weinjiniya edu ane ruzivo rwakanyanya mune dhizaini uye kugadzirwa kwemagetsi nemagetsi emagetsi, uye magungano. Ivo vane hunyanzvi hwekusarudza uye eva1uation yemagineti zvinhu uye zvikamu. Ivo vakajaira kushanda nevatengi pamatanho ese ekugadzirwa kwavo, uye nekukubatsira iwe kusarudza mhinduro dzinonyanya kuenderana nezvaunoda, uine mutengo-kushanda mupfungwa.
Rega hunyanzvi hwedu hwehunyanzvi uye ruzivo rwunobata zvese zvako zvaunoda. Isu tinotumidzira huwandu hwakakura hwehukuru kubva kumafekitori edu, Tine timu yeinjiniya vanokweretesa hunyanzvi hwavo hwekunyanzvi uye dhizaini yekusangana neyako chaiwo. Masampula anowanikwa nemutengo, uye anogara achibatwa uye kuendeswa nekukurumidza sezvazvinogona. Tooling-up nguva kazhinji inotora isingasviki matatu mavhiki ehukuru diki sampu. Titumire madimikira ako nhasi, uye isu tichaita nekukurumidza kusangana nezvako zvekugadzira dhizaini neinodhura-mutengo zvigadzirwa.